Walaloon "Onnee midhameef qoricha'' - BBC News Afaan Oromoo
Haaromsameera 20 Adooleessa 2018
Madda suuraa, Zelalem Abera
Haalawwan uummanni Oromoo ittiin yaadasaa ibsatuufi ergaa ittiin dabarfatu keesssaa walaloon bakka olaanaa qaba. Walaloon jiruufi jireenya uummata Oromootiin walitti hidhannoo cimaa akka qabu beektoonni ni dubbatu.
Nutis walaleessaa Oromoo beekamaa Zalaalam Abarraa dubbifneera. Obbo Zalaalam Abarraa, seenaa walaloo Oromoo keessatti walaloo qalbii hawwatuun dursaadha; maqaa gaariis hortaniiru.
Obbo Zalaalam gahee walaloon Afaaniifi aadaa Oromoo keessatti qabu yoo himu: "Oromoo walaloodhaan jiraata, walaloodhaan ka'ee rafa, walaloodhaan hojjeta. Bakka tikaatti, qonnaa, lafa meesuufi aramaatti akkasumas bakka fuudhaafi heerumaatti walaloodhaan dubbachuu jaallata."
Oromoon walaloo akka jaallatuufi durirraa akka dhimmi itti ba'u ni dubbatu. Akka ilaalcha Obbo Zalaalamitti dhaloonni ammaa kun walaloo ni yaalu malee hanga abbootii keenyaa hin ga'an.
Walumaagalattis Walaloon uummata Oromootiif dadammaqsuufi dubbii miliqxe baasuu keessattis waan guddaa hojjeteera, jedhan.
Fuula 'www.Oromo Litertature' irratti hojiiwwan Obbo Zalaalam mursaanni itti kuufamanii argamu. Fuula kanarratti, hojii isaaniin alatti afoolawwan Oromoo keessaa walitti qabanii, akkasumas walaloo afaan biraa irraa hiikanis kuusaniiru.
Obbo Zalaalam walaloo barreessan kan isaan kakaase, waan karaa ittiin of ibsanidha ta'eefiidha jedhu.
"Waan ati of keessaa qabduufi karaa cabsee ba'uu barbaadutu jira. Isas akkasumatti barreessuun iddoo barbaadde sana siif ni ga'a sitti hin fakkaatu" jechuun himu.
Obbo Zalaalamiif walaloon, "Onnee midhameef qoricha, kan gadde ni jajjabeessa, kan haare ni gammachiisa, abdii gaggabetti lubbuu hora, miiltoo qofa-galeessaati. Humnaafi hamilee jigiifi dabooti; isa of dagate of yaadachiisaa; kana muge ni dammaksaa. Hawaasa birattimmoo dhugaa miliqe ifatti baasa, riqichaa jaalalaafi waliigalteeti.
Kanaaf, walaloon meeshaa guddaadha jedha.
Walaloo hedduu kan barreessan Obbo Zalaalam, walaloon jalqabaa isaanii Malli Maali' kan jedhudha. Akka waloon dureen kun jedhanitti, walaloon kun waa'ee jireenya qote bulaa ilaala. Qote bulaa waliin jiraadheera hojjedheera, jechuunis dubbatu.
Amma tokko jireenya isaanii nan beeka, kan jedhan Obbo Zalaalam, "Qote bulaan baruma baraan osoo hin bayyanatiin, jireenyi foyyee qabutti osoo hin ba'iin afuun natti dhaga'ama ture," jedhu.
Mata dureen walaloo gaaffii ta'e kanaan eenyuun akka gaafatan yoo dubbatanis, "Ofiikoos, abbaa dhimmaas, saba Oromoos, akkasumas beektotas nan gaafadhe. Walumaa galatti sabuma Oromoo hundaaf gaaffii dhiyaatedha," jedhu Obbo Zalaalam.
Walaloon barreesse hundi isaanii suukanaafi haala adda addaa keessatti barreeffaman waan qabaniif tokko tokkorra caalchisee hin ilaalu jedhu.
"Garuu kan ani ittiin beekamu akkuma namni tokko ijoollee baayyee horee ilma isa hangafaan Abbaa Tolasaa jedhamee waamamu anis isuma jalqabaan na waamu."
Kana jechuun ammoo warri kaan hin jiran jechuu miti. Kanaaf, walaloon warri jalqaba kaasetatti ba'an akka Malli Maalii,Obboo Abbaa Xadaa, Uggum Kubbaa Miilaa, Utuu jedhan warra jalqabaa waan ta'aniifi namoonni isaaniin akka isa beekan ibsu.
Obbo Zalaalam, ijoo walaloon isaanii irratti fuulleffatu yeroo dubbatan, aadaa, ilaalcha, safuu, mirgaafi afaan saba Oromooti jedhu. Hundumaa of keessaa qaba. Kan walaloon isaa nama biratti fudhatama argateefis sababa kanaaf ta'uu akka hin oolles ni dubbatu.
Kan ofii barreessaniin alattis walaloo namoota bebbeekamoo afaan Ingiliziitiin barreeffamees gara Afaan Oromootti hiikaniiru Fakkeenyaaf, walaloo Dr. Maayaa Anjeelloo 'I shall rise', kan Dudly Randall fi kan biroo Afaan Oromootti hiikaniiru.
Maaliif walaloo namoota kanaa hiikuuf akka filatan yeroo dubbanis, tokkoffaa ergaa ciccimoo qabu, sabni gidiraa keessa jiru tokko attamittiin akka of ibsu, akka dadammaqinsa uumuu walaloo barreessa. Kanaaf, kunimmoo saba keenya waliin walfaakkaata jedhu.
Walaloo isaaniitin seenaa dhufee-darbaa, ilaalchaafi falaasama, aadaafi saafuu, akkasumas haala sabni Oromoo itti jiruufi egeree Oromoo kaasuu qofa miti akka jaallataman kan taasisan. Akkataan itti dhiyeessaniifi jechoonni filataman humna addaa akka qaban namoonni dhugaa ba'uuf.
Obbo Zalaalam walaloo barreessan biyya alaa Fiinlaadiin biyya jiraatanirraa barreessaniyyu jechootaa filataniifi yoomiifi eessa walaloon isaanii sirriitti uummata Oromoo keessa jira.
Tarii akka Afaan Oromoo sirriitti jechoota sirriin fayyadamu keessattuu kan uummanni baadiyyaa itti fayyadamu akkan fayyadamu kan na taasise, isaan waliinan oolaan ture jedha Obbo Zalaalam.
"Kanan dhaladhes baadiyyaatti yommuu ta'u jireenyikoos qote bulaa wajjin walqabata, abbaankoos qote bulaadha, qe'een itti guddadheefi namoonni na guddisanis Oromoodha," jedhan.
Kotobee Metiropoliitaan Yunvarsiitiitti barsiisaafi qorataa komunikeeshinii kan ta'an Obbo Zalaalam Jabeessaa walaloo Obbo Zalalaam keessaa Malli Maali isa jedhurratti qorannoo gaggeessaniiru.
Walaloo Zalaalam kana barsiisaa, hawwataafi humna-qabeessa kan taasisan sababoota baayyee kaasuun ni danda'ama jedhu barsiisaan kun.
Akkan qorannoo irratti taasiseen: "Biyya ormaa taa'ee jechoota mimmiidhagoo uummanni ittiin waliigalu filachuunfi fedhiifi gaaffii uummatichi qabu kaasuun isaa kennaa ykn dandeettii addaa akka qaban mullisa," jedhan.
Fakkeenyaaf, bara walaloon kun itti barreeffame namoonni ulaa tokko kan ittiin miira ofii ibsataniifi gaaffii qaban gaafatan miidiyaan hin jiru ture, jedhu.
Miidiyaan Afaan Oromoon yeroo sana hin turre. Muraasni turtanis fedhii, rakkoofi faayidaa uummataa waanti kaasan hin turre.
"Yeroo walaloon Malli Maali jedhu uummataaf dhiyaate uummanni gubbaa hanga dakaatti gaaffii qaba ture."Kanaaf, namoota hunda biratti fudhatama argate akka barsiisaa Zalaalam jedhanitti.
Sabni Oromoo irra jireessi qote bulaadha ykn ilmaan qote bulaadha. Kanaaf, walaloo sana keessatti Caaliifi Abbaa Caalii moggaasee hawwiifi fedhii sabaa, gaaffii siyaasaafi hawaas-dinagdee isaanii qabatamaatti mullise, jedhu barsiisaan kun.
Obbo Zalaalam walaloo barreessuu qofa osoo hin taane Og-barruu Oromoo karaa afoola adda aaddaatiin walitti qabuun kitaabatti maxxansuuf hojjechaa jiru.
Kanas yeroo dhiyoo keessatti akka gabaarra oolchan abdii qaban dubbataniiru. Kanaan duras kuusaa walaloo isaanii Kitaaba OBOMBOLEETTII jedhu bara 2017 maxxansiisaniiru.
Namoonni Afaan Oromoorratti qoratan, barattoonni Oromoo, dhaabbileen barnootaafi namoota dhuunfaa hojii isaanii kana barbaadan hedduuti jiru.
Obbo Zalaalam akka jedhanitti garuu biyya ambaa keessa jiraatanirraa saba ball'aa hojii isaanii kana argachuu fedhan qaqqabsiisuun akka hin mijoofneef dubbatu.
Kanarratti namoonni, dhaabbileefi abbootiin qabeenyaa hojii isaanii kana saba biraan ga'uurratti ga'ee isaanii akka ba'anillee dhaamaniiru.
''Misirroo dabalatee ajjeechaa Gammachiis Moosisaan shakkamuun namoonni jaha to'annoo jala oolan'
''Ajjeechaa Gammachiis Moosisaan shakkamuun misirroo dabalatee namoonni jaha to'annoo jala oolan'